रघुगंगाको गाउँसभामा वडा सदस्य तिलक कुमार तिलिजाले पहिलो पटक राखे लिखित प्रस्ताब - Myagdi Online
रघुगंगाको गाउँसभामा वडा सदस्य तिलक कुमार तिलिजाले पहिलो पटक राखे लिखित प्रस्ताब
5703 पटक पढिएको
आदरणीय यस गाउँसभाका सभाध्यक्ष ज्यू
रघुगंगा गाउँपालिका उपाध्यक्ष ज्यू
विभिन्न वडाका वडा अध्यक्ष ज्यूह?
मेरा समकालिन वडा सदस्य ज्यूहरु ?
रघुगंगा गाउँपालिका कार्यालयमा कार्यारत, यस सभामा पाल्न’भएका कर्मचारी ज्यूहरु?
समृद्ध रघुगंगाको सपना लिएर यस सभामा पाल्नु भएका, यस सभाका निर्णय सुन्न आउनु भएका अन्य महानुभाव ज्यूहरुमा
म तिलक कुमार तिलिजा को
न्यानो अभिवादन छ. स्वीकानुहोस् .
समृद्ध रघुगंगाको खाका कोरिरहँदा, केहि सोच, ऐजेण्डा, सपना र विचार हरु पुस्तागत हुने नै रै छ. त्यसैले विना ऐजेण्डा , केवल समर्थनका ताली पिट्न यी गाउँसभामा उपस्थित हुने मान्छे होइन म । यसो भन्दैमा आज यहाँ उपस्थित भएर स्थानिय सरकार , नेपालको संविधानले म जस्तो साधारण वडा सदस्यलाई प्रधान गरेको अधिकारको प्रयोग गरि केहि शव्दहरु बोल्न चाहे । सर्वप्रथम त रघुगंगा गा पा कै लाइफ लाइन सडक मानिने गलेश्वर दग्नाम दर्मिजा चिमखोला कुइनेमंगले सडकलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएकोमा यस सडक संजाल निर्माणमा प्रत्क्षय तथा अप्रत्क्षय रुपमा संलग्न हुने हामी सम्पुर्णलाई हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
विशेप गरी धन्यवाद दिदाँ,
पूर्व मन्त्री ज्यू
संघिय सभा सदस्य माननीय सांसद ज्यू
प्रदेश सभा सदस्य ज्यूको योगदान लाई यहाँ स्मरण गर्न चाहे ।
यस लगायत हाम्रो स्थानिय सरकारको पनि यस कार्य सफलतामा महत्वपूर्ण योगदान रहेको कुरा यहाँहरु माझ स्पष्ट रहेको छ ।
यसरी धन्यवाद दिदै गर्दा कार्यक्षेत्रमा प्रत्क्षय रुपमा दिन रात हिउद बर्खा केहि नभनी अहोरत्र खट्नु भएका भाइ सुविन लगायतका टिमलाई पनि यसै मन्चबाट सम्झि धन्यवाद सलाम भन्न चाहे । सडक संजालको कुरा गरिरहँदा कोभिड–१९ यस ७७ सालको भिषण वर्षा, वातावरण प्रभावको गलत अध्ययन, ठेकेदार ज्यूको चरम्र लापरवाहीले गर्दा गलेश्वर पिप्ले भगवती बेग सडक स्तरउन्नतीको काम ठप्प छ । यस सडक विस्तारको क्रममा सिर्जित पहिरोले राहुघाट को पुरानो बस्तीलाई उच्च जोखिममा पारेको छ । यसका लागि गाउँपालिकाले केहि हद सम्म रोकथामको प्रयास हरु गरेको छ. ।
आर्थिक वर्ष चलिरहँदा त्यस प्रभावित सडक खण्ड बाहेक अन्य स्थान हरूमा समानुपातिक ढङगले सडक संजाल स्तर उन्नती हुनुपर्छ भन्ने माग यस सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहान्छु । सकभर यस सडकले जोड्ने प्रत्येक वडाहरुमा सडक स्तरउन्न्तीका कामहरु संचालन हुन जरुरी र आवश्यक ठान्दछु । पालिका बाट निर्माण कम्पनीलाई पनि सोहि आदेश दिनुहुन आग्रह गर्न चहान्छु । यस पश्चात यस सभालाई हराएको तथ्याङ्क र त्यसको प्रभाव बारे प्रकाश पार्न चहान्छु । आज संचार र प्रविधिको युगमा पनि बेला बखत फलानो बर्षमा नागरिकता प्राप्त भन्ने शिर्षिक समाचारहरुले हामी सहज अनुमान ल्गाउन सक्छौं कि हाम्रो तथ्याङ्क संकलन प्रकृयामा धेरै कमी कमजोरीहरु छन् । हाम्रा अहिलेका तथ्याङ्क हरु ५८ (अन्ठाउन्न) को सारेर ६६ सालको र ६६ को सारेर ७३ सालको बनाइएको छ ।
यी सालहरुमा धेरै परिवर्तन भएका कारणले जनताहरु तथ्याङ्क बाट छुट्न गइ, उनिहरु सेवा र सुविधा बाट वन्चित भएका छन् । यद्यपि सुचनाको प्राप्ति पछि पालिकाले एक्सन लिएको छ तर यी र यस्ता समस्याहरु धेरै नै छन् जो प्रकाशमा आएका छैनन्. यी कमी कमजोरीहरुका समाधानका लागि म विश्व प्रख्यात ग्राउण्ड कार्पेट सर्च विधिबाट एक पटक र त्यसको डिजिटलाइजेशन गरी दुई पटक शून्य लेभल बाट तथ्याङ्क संकलन गरिनु पर्दछ भन्ने अनुरोध गर्दछु ।
यस्तो ग्राउण्ड कार्पेट सर्च विधिको जिम्मा प्रत्येक वडाका शिक्षित युवा वर्ग, स्कुल, क्लब आदिलाई जिम्मेवारी दिनु पर्दछ भन्ने माग राख्दछु ।
सुविधा मैत्री र प्र्रविधि मैत्री पालिका बन्दै गर्दा हाम्रो पालिकाले पनि डिजिटल प्रविधि खरिदको प्रक्रिया गरेको र बजेट बिनियोजन भएको खबरले उत्साहित छु । कुनै पनि कमिसनको चलखेलमा अरु सस्ता प्रबिधिहरुको छनौट हामीलाई मन्य हुने छैन । नेपालको १११ भन्दा बढि पालिकाको पहिलो रोजाइमा परेको स्मार्टपालिका प्रविधिलाई नै छनौट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । देश परिवर्तनको घडिमा छ । विकाशका नाममा धेरै पर्यटकिय गन्तव्यहरु बर्बाद उजाड बनेका छन् । यस्ता विनासका कारण हामी जस्तो पिछडिएका भुगोल र भेगहरु अधि बढि फाइदा लिनु पर्ने मौका आएको छ । फाइदा उठाउनको लागि पर्यटन उद्योगमा धेरै अवसर छ । यस्तै हामीले हाम्रो लागि सिर्जना गरेको अवसर धौलागिरी आइसफल ट्रेक हो । पालिकाको समस्त वडाहरुलाई समेट्ने , एकदम अनुपम, प्राकिृतिक, मनोर र स्वच्छ यो पदमार्ग विश्व कै उत्कृष्ट गन्तव्य बन्नेछ भन्नेमा दुई मत छैन । यस पदमार्ग , यसको उद्योग, व्याव्सय र व्यापार मार्फत पालिकाको आन्तरिक राजश्व संकलनमा चौगूणा बढाऊ हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वश्त छु ।
यसै सन्दर्भमा म, रघुगंगा पर्यटन विकाश बोर्डको स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्दछु । धौलागिरी आइसफलमात्र नभएर रिखार , टोड्के, रुइसे जस्ता क्षेत्रहरुमा पनि यस्तै विकाश मोडलहरु बन्न आवश्यक देख्दछु । यी सगैं बहादुरहरुमा पनि बहादुर , वीरहरुमा पनि वीर , गोर्खाली त्यसमा पनि दुर्लभ भिसी विजेता तुल बहादुर पुन ज्यूको जन्म÷मरण यसै पालिकाको वडा नं १ अन्तरगतको बाँदुक गाउँमा भएको हो ।मलाई लाग्छ राष्ट्रले उहाँ र उहाँको योगदानलाई चिन्नुपर्दछ । उहाँको गाउँलाई भिसी गाउँका रुपमा परिचित गराई पर्यटकीय गाउँको रुपमा स्थापित गर्नु पर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्दछु । उहाँको सम्झना स्मृतिमा भिसी संग्राहलय , बगैँचा, र अर्धकद स्तम्भ बनाउने प्रस्ताब पेश गर्दछु । यी सगैँ अन्य पूर्वाधारहरुका स्थापनाका प्रस्तावहरु पनि पेश गर्दछु ।
यस पश्चात म स्थानीय रुपमा उप्लव्ध हुने कच्चा पदार्थहरु जस्तै ऊन, अल्लो, सिस्नो, टिमुर, लोक्ता, आदिको प्रशोधन र उद्योगको विस्तारीकरणको अनुरोध गर्दछु । स्थापना भइसकेका लाई दर्ता नविकरण र नयाँ स्थापनालाई सहयोग सहजिकरण गर्न अनुरोध गर्दछु । भौतिक विकाशमा मात्र सिमित नरहेर सामाजिक विकाश र बौद्धिक विकाशका लागि पनि कार्य योजना हरु पनि बनाइनुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्दछु । बनेका योजना, तालिमा आदिका फार्म भर्न, भराउने प्रकिृयालाई अझै सहज र सरल बनाइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु । अन्तयमा , यी गाउँसभाहरुका पनि भर्चुअल टेलिकाष्ट गरी प्रविधि मैत्री सभा र बैठक हरुका आयोजनाका प्रयास हुनु पर्छ भन्ने माग सहित मेरो वक्तव्य यहि अन्तय गर्न चहान्छु ।
तिलक कुमार तिलिजा
वडा नं १, बेगखोला
नवौँ गाउँसभामा वडा सदस्यद्धारा पहिलो पटक प्रस्तुत भएको लिखित प्रस्ताब ।
Do Bahadur Garbuja says:
धेरै राम्रो लाग्यो। मलाई धेरै खुसी र गर्व को महसुस भएको छ कि हाम्रो गाउँमा साँच्चै नै अब चेतनशील नव युवा हरू जाग्रित भएका र अब धेरै भन्दा धेरै यस्तै प्रतिभा साली युवा हरू जन्मने छन् र गाउँ समाज लाई बिस्तारै बिस्तारै आधुनिक तरिकाले सामाजिक, राजनीतिक र बौद्धिक तरिका बाट प्रगति उन्मुख बनाउने छन्। यसमा सबैले आ आफ्नो तह र तप्का बाट सहयोग र हातेमालो गर्न जरुरी छ।
टक पाइजा पुन मगर says:
सहमती छु सर